Jimma Yuunibarsiitii Keessatti Barattoonni Fincila Xumura Garbummaa Gad Jabeessuun Itti Fufanii Jiru | QEERROO
Qabsoo Fincila Diddaa Garbummaa gara Fincila Xumura Garbummaatti ce’ee jiru gamma ga’iinsaaf kan akeekkate males galma isaa kan hingeenye ta’uullee sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof himanii jiru. Sirna garboonfataa Wayyaaneetti Xumura gochuuf ammallee FXG haalaa akka finiinuu qabu ejjeennoo isaaniin ibsatanii jiru. Dabalataan Oromoon ilna namaati males sinbira miti kan akka sinbiraa qe’eef araasaarraa buqqaafamee harmeen keenya adiyyoorratti sharaa baqaaf daasii baqattummaa jalatti dahuun akkaan nu aarseera jedhu barattoonni yaada nuu laatan. Kanaaf uummanni Oromoo guutummaan waan qabuun caasaa mootummaa Wayyaanee hundeen ofirraa qoorba’uun amma ta’uullee dubbatani, qabsoo amma eegalan kana hanga mootummaan nageenya biyya keenya eegsisu mootummaan Ce’umsaa kan Adda Bilisummaa Oromoo makate dhaabbatutti fxg gad jabeessuun akka itti fufamu dubbatu.
Dabalataan yaada uummata Oromoo burjaajessuuf akka waan qabsoon Oromoo galma gaheetti diddaa dhaabaa, Fincila hindhageessisinaa jedhu qabsaa’ota haqaaf Qeerroo kan hinilaallanne yaada diinaa ta’uu dubbatan.
Gaaffiiwwan COC wal qabatan fi mirga namoomaa uummata Oromoo mooricha keessatti kabajamuu akka qabuuf dhiyatanis kallattiin biiroo peresedant moorichaatti deemamee kennamuu gabaasni arganne ifa godha.
Gaaffii barattoota karaa nagaa gara jeequmsaatti jijjiruuf humni waraanaa Wayyaaneen moorichatti naannahuun Foolisoonno Federaalaa barattoota shororkaa akka jiranis dubbatameera. Foolisoota Federaalaa ajaja TPLF tiin nama ajjeessuuf bobbaafaman kan valaaleffatan barattoonni hiriira kanarratti hirmaatan balaaleffatamaa ta’uu gaaffii nagaa gara gaaffii nageenya booressutti jijjiiruun akeeka dimokutmraasiin ala ta’uu dubbaniiru.